LIISKA TAXADARKA DHIRTA UGU FIICAN LEH SHARAXAAD IYO SAWIRRO - BEEKEEPING
Ugu Weyn Ee Beekeeping
The dhirta ugu wanaagsan ee dhirta malab for bees aad
Si aad u hesho mugga wanaagsan ee malab, waa mid aad u muhiim ah in ay leeyihiin tiro badan oo cawska malab u dhow apiary. Haddii aanad jirin, waxaad ku caawin kartaa dabeecada iyo weliba inaad ku biirto beerashada dhirta oo awood u leh soo saarista miro iyo nectar badan. In this article waxaan ku siin doonaa liiska dhirta malab wanaagsan, isagoo intaa ku daray inuu sawir leh magacyada.
Geedaha iyo geedaha
Geedaha iyo duurka kuwaas oo dhirta malab wanaagsan leh waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Geedkii Linden Tani waa warshad malab aad u jecel, taas oo meel walba loo qaybiyo. Muddada uu ubaxu wuxuu bilaabmaa July. Ururinta Honey waa mid aad u ballaaran, waxay gaari kartaa 1 tii 1 hektar oo laga beerto geedo.
Ku'saabsan. Geedka waxaa iska leh beerta. Warshad malab qurux badan iyo manka. Ubaxku caadi ahaan wuxuu dhacaa Maajo. Waxaa lagu gartaa wax soo saarkoodu hooseeyo, 10kg ah halkii 1 ha oo ah beeritaanka saafiga ah.
Willow. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah maqaarka ugu caansan. Tirada ugu badan ee noocyada xayawaanka waxay ku koraan geedaha (soodhada, dhirta, trekhtychinkovaya), geedaha qaar - sida jilicsan, cadaan). Willow wuxuu jecel yahay dhul qoyan, wuxuu si fiican u koraa meel u dhow biyaha. Warshadani waxay iska leedahay ubax horay guga. Wax-soo-saarka wuxuu ku kala duwanaan karaa inta u dhexeysa 10-150 kg / ha.
Cherry Tani waa geed beerta oo ku beeri doonta beerta oo dhan. Bilowga ubaxu wuxuu ku dhacaa qaybta hore ee May. Waxsoosaarida ururinta malabku waxay noqon kartaa ilaa 30 kg halkii 1 ha.
Buckthorn ayaa jabtay. Waxay u egtahay geed yar ama geed. Wakhtiga ubaxu wuxuu bilaabmaa bilawga xagaaga wuxuuna soconayaa ilaa dhammaadka. Malab tayo sare leh ayaa lagu ururin karaa qaabka 20 kg ee 1 ha.
Kalina. Tani waa warshad duurjoog ah. Badanaa waxay ku koraan qaabka geedaha, marar dhif ah - qaab geedka yar yar. Waa mid aad u ballaaran, maadaama aysan haysan shuruudo gaar ah oo ku saabsan xaaladaha cimilada. Midabka koowaad waxaa laga arki karaa horraantii Juun. Wax soo saarka beerka malabkani waa 20 kg / ha.
Raspberry Forest. Waa aal aad u qiime badan oo bogsiinaya dhirta. Waxaa si wayn u koraaya kaymaha, gaar ahaan qaanadaha iyo qoraxda. Waxay Blooms June. Ilaa 100 kg oo ah malab delicious ah ayaa laga goyn karaa 1 ha.
Beerta xayawaanka ah. Sida lagu fahmi karo magaca, raspberries noocan oo kale ah ayaa sii kordhaya sirqo khaas ah. Waxay leedahay muuqaal ah geed. Wakhtiga ubaxku wuxuu daboolayaa dhammaanba Juun. Waa weel macaan oo aad u wanaagsan, maaddaama 200 kg oo sheyga macaan laga soo qaado 1 ha.
Kaabashka guud Ma fududa in la yidhaahdo warshad jilicsan, tan iyo inta nectar dhowr ah oo qarsoodi ah by warshad this. Ubaxu wuxuu bilaabmaa guga horraanta, marka barafku uusan gebi ahaanba dhalaalin. Manka oo qurux badan. Waxaa mahad leh shinni fiiqan guga oo si firfircoon u buuxiya kaydka.
Rowan. Geedka hooseeya wuxuu u koraa labada kaynta iyo beeraha. Inta badan waxay ku koraan sirqoollada guriga. Blooms guga goor dambe. Waxaad soo qaadan kartaa badeeco macaan ilaa 40 kg hektar.
Lul Waa geed beerta oo laaluush siin karo qiyaasta wax ka badan 40 kg hektar. Waqtiga wax soo saarka wuxuu bilaabmaa Maajo wuxuuna soconayaa ilaa 10 maalmood.
Currant black. Buuggan waxaa laga heli karaa dhammaanba meelaha ka baxsan magaalooyinka. Waxay ku jirtaa muddo dheer, badanaa May. Wax-soo-saarka - 50 kg halkii 1 ha.
Blueberries Warshad malab geedka yar yar. Waxay kobcisaa kaymaha isku dhafan iyo qoyan. Wuxuu billaabayaa in la barbardhigo dabayaaqadii May. Haddii dhirta ay leeyihiin cufnaanta sare, ka dibna ilaa 80 kg oo malab ah ayaa laga soo qaadi karaa 1 ha.
Geed geedeedka Tani waa geedka dhirta caadiga ah. Waqtiga wax soo saarka wuxuu bilaabmaa Maajo wuxuuna socdaa ilaa dhammaadka Juun. Xagaa malab yar ayaa laga goyn karaa 1 hektar oo ah warshad nadiif ah - qiyaastii 20 kg.
Thyme Xirmadan tani waxay ku koreysaa carrada saboolka ah iyo duurjoogta. Wuxuu jecel yahay meelaha qorraxda iyo furan. Muddada ubaxu waxay dhacdaa qeybta labaad ee xagaaga. Nektar wuxuu soo saari karaa wax badan. Laaluushku wuxuu gaari karaa 170-200 kg halkii 1 ha.
Cherry Bird Iyadoo ku xiran noocyada, cherry shimbirta wuxuu u kori karaa sidii geed yar, iyo baadiyaha. Under xaaladaha raaxo, muddada ubax bilaabmaa dhamaadka May. Nadiifinta iyo dhirta manka ayaa soo badanaya. Waxsoosaariddu waa qiyaastii 200 kg / ha.
Ma taqaanaa? Dhanka qadiimiga ah ee Rome, malab waxaa loo isticmaali karaa nooc lacag ah. Waxay bixin karaan iibsashada iyo xitaa bixiyaan ganaax.
Dhirta iyo ubaxyada
Intaa waxaa dheer in geedaha, waxaa sidoo kale jira geedo iyo ubax badan, kuwaas oo sidoo kale dhirta malab oo cajiib ah. Dhirta malab ee ugu caamsan waa:
Dayrta Kulbaba. Warshadani waxay ku koreysaa meel kasta. Badanaa waxaa lagu wareersan yahay løndelion caadiga ah. Midabka laga bilaabo Julaay ilaa horraantii Sebtember. Wax-soo-saarku badanaa waa inta u dhaxaysa 80 kg / ha.
Coltsfoot Ubax Tani waxay iska leedahay dhirta malab hore. Wax-soo-saarku waa mid hooseeya, badanaaba haynta 30 kg / ha. Si kastaba ha ahaatee, coltsfoot waa mid aad u qiimo badan, maadaama ay leedahay tiro ka mid ah guryaha dawooyinka, iyo sidoo kale sii dillaacaan manka si dheeraad ah nectar.
Dandelion officinalis. Waxaa si xaq ah loo saari karaa dhirta ugu caansan aduunka. Ubax wuxuu bilaabmaa horraantii Juun. Waxaa lagu gartaa waraaq yar, laakiin muddo dheer. Isugeynta celceliska waa 50 kg halkii 1 ha.
Chernogolovka caadiga ah. Waxay jeceshahay carrada qoyan. Muddada ubax ee bilaha Juun ilaa Sebtembar. Laaluushku wuxuu gaari karaa 120 kiiloogaraam hal hektar.
Maydh Waxay jeceshahay inay ku koraan agagaarka biyaha ama carrada qoyan. Si firfircoon uga shaqeynaya bilaha Juun ilaa Sebtembar. Xaaladaha wanaagsan, laaluushku wuxuu noqon karaa mid aad u weyn - ilaa 1.3 ton halkii hektar.
Birdhouse pineal. Dhirta malab ee noocan oo kale ah waxay u koraan si aad u fiican meelihii pristenenny, waxay jecel yihiin ciid qoyan. Geedi socodka ubax firfircoon wuxuu dhacaa Juun-Sebtembar. Laaluushku wuxuu u eg yahay mid ka mid ah rinjiga - illaa 1.3 t / ha.
Cornflower. Warshadani waa beer, diiqad. Laaluushku wuxuu ku jiraa 110 kg hektar. Cornflowers Bloom laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar.
Cagaarka cad. Warshadani waxay ka timaaddaa reerka legume. Wuxuu jecel yahay carrada qoyan. Blooms May iyo June. Wax-soo-saarka wuxuu noqon karaa ilaa 100 kg hektar.
Medunitsa officinalis. Warshad waxaa iska leh dhirta malab hore, sida ay Bloom ee April iyo May. Waxay si gaar ah ugu koraan kakoobka iyo kaymaha. Wax-soo-saarka ayaa ku kala duwanaan kara inta u dhexeysa 30-80 kg halkii hektar.
Peresleska sharaf leh. Warshadani waa mid aad u caan ku ah kaymaha. Bloomsiyada guga hore. Nectar wax yar ayay soo saartaa, laakiin waxay soo saari kartaa manka si aad u badan.
Ma taqaanaa? Sandbiil malab la cunay subaxdii ka dib fasaxa ayaa kaa caawin kara in ay naaquso raaxo la'aanta sababtoo ah ciriiri, sababtoo ah waxay ka saartaa khamriga jirka.
Dhirta qaasatan beeraha
Beekeepers waayo-aragnimo leh si aad u hesho laaluush wanaagsan oo badeeco macaan, barbar dhigi dhirta malabyada iyaga laftooda. Sidaas darteed waxaad ka qaadi kartaa dhirtaas si fiican u kori doona aagga la doortay. Sidaas oo kale waxaad si weyn u kordhin kartaa tirada malab la soo ururiyey.
The dhirta malab ee ugu wanaagsan ee bees iyo caan ah for is-kobcinta waa:
Dhirta cagaaran iyo cad. Warshad this Blooms ee May iyo sii waday in la Bloom ilaa dhamaadka xagaaga. Haddii aad xaqiijiso daryeelka beeraha ku habboon, baadiyaha waxay kori karaan ilaa 2 m dherer ahaan. Roodhiga ubaxa waxay ku xiran tahay nooca dhirta. Ku dhawaad ​​nooc kasta oo ciid ah ayaa ku habboon Donnik. Isagu wuu u dulqaadanayaa kulaylka, oo si wanaagsan ayuu u soo baxaa abuurkiisa. Honey ka soo dhirta this loo tixgeliyaa ugu qiimaha badan, sida badan beerto waxay si firfircoon u koraan sabab wanaagsan. Si ay u koraan huruud ama caleemo madaxbanaan, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo abuurka abuurka, tani waxay ka caawineysaa fuuqbiyada si ay u dhaqso badan. Goobidda waxaa lagula talinayaa guga hore ama ka hor inta aanuu barafku dhicin. Waxaa muhiim ah in la qiyaaso wakhtiga beerto si dhirta loo helo waqti ay jebiyaan kahor bilawga xilliga cimilada qaboobta. Wax soo saarka beerka malabku wuxuu gaari karaa 270 kg oo malab hektar ah.
Clover. Wixii shinni ah, waxaad ku kori kartaa labada cagaarka iyo dhir cad. Ubax jaleecada hore waxay u muuqan kartaa mid aan muuqan, laakiin waxay aad u jeclaanayaan shinni. Warshadu waxay si weyn ugu korodhay meesha ay dad badani ku socdaan. Ma cabsanayo roob ama heerkulka heerkulka. Waxa kaliya ee noqon doona mid waxyeello u ah dhirta waa hooska. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in si fiican loo helo qoraxda. Malabaha cawsku wuxuu leeyahay midab cad, caraf xoog leh, sidoo kale wuxuu aad u hodan yahay nafaqooyinka. Ilaa 100 kg oo malab ah ayaa laga goyn karaa hektar kasta oo lagu beeray dhir. Beeridda geedkan waa in la fuliyaa bisha Agoosto. Wixii beerashada ee biqilaha dhirta caleemaha waxay u baahan doontaa 5 kg oo miraha ah abuur ah, for white - 3 kg ee wax beerto. Seeds laguma beeri karo qoto dheer ka badan 1 cm ciidda. Dhulka beerta ka dib waa in lagu shubaa si aad u badan. Caleemaha ugu horreeya waxay caadi ahaan u muuqdaan laba toddobaad. Wakhtiga ubaxu wuxuu qaadanayaa dhammaan xagaaga, sidaas darteed beekeeper waa mid faa'iido leh si ay u koraan dhirta.
Geed husob. Warshadani waxay asal ahaan ka timid Aasiya. Bilaabaan in la Bloomiyo ee July iyo sii wadaan ilaa dhamaadka dayrta. Ubaxa waa midab casaan ama lilac. Si aad u koraan on sawirka, waxaad isticmaali kartaa abuurka ama si fudud u kala qaybiyaan baadiyaha. Waa wax aan macquul ahayn in lagu qodo abuurka aad u qoto dheer, qoto dheerka ugu sareeya waa inuu ahaado qiyaastii 0.5 cm, haddii kale si fudud ma geli karo. Dhulka waa in lagu fuliyaa ciidda iftiinka ah. Hyssop aan qabin xaaladaha cimilada, u adkeystaan ​​qabow iyo la'aanta qoyaan.
Xoolaha Kotovnik. Warshadkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa maraqa darajada. Waxay ku jirtaa horaantii Luulyo waxayna sii socotaa ilaa cimilada qabowga. Buundada way hooseeysaa, qiyaastii 0.8 m Bees Beerkuna aad ayuu u jecel yahay. Seeds marmarka qaarkood si liidata u jilicsan berrin furan, sidaa daraadeed waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo geedo, ka dib markii lagu beero abuurka weelasha. Kotovnik wuxuu jecel yahay waraabinta biyaha iyo iftiinka caadiga ah.
Lofant. Ubax Tani waxay ku habboon tahay beekeepers maxaa yeelay waxay si qurux badan ugu koraan isla goobta 10 sano. Waxaa lagu faafin karaa geedo ama geedo. Doorashada koowaad waa mid deg deg ah oo aad ufiican. Kobcinta wanaagsan ee lofant waxaa lagu dhiirrigelin doonaa iftiinka wanaagsan ee sawirka, ka dibna baadiyaha waxay ku koraan ilaa 1.5 m ee dhererka. Buunashu waxay sidoo kale awood u leedahay in ay u adkaysato abaaro qabow iyo gaaban, laakiin inkastoo ay taasi tahay lagama maarmaan in la biyo qaboojiyo, haddii ay suurtagal tahay, daboolka ka qabow.
Riwaayadaha bari Tani waa warshad dilaac ah oo aan u baahnayn wax badan. Celcelis ahaan, koraa 50 cm, Muddada ubaxu wuxuu bilaabmaa May. Si aad u koraan riyaha, miraha u baahan tahay in la beeray July, sidaas darteed ka hor inta aan la iman cimilada qabow, wuxuu ku guulaystay inuu horumariyo si fiican. Seeds waxay u baahan tahay dabacsanaan. Wax soo saaridda geedkaan waa mid aad u fiican, waxaad soo ururin kartaa qiyaastii 200 kg oo ah badeecada malabka ah 1 ha. Isla mar ahaantaana beeritaanka aag isla waxay u baahan doontaa 28 kg oo farac ah.
Caleemaha caadiga ah. Waa wax faa'iido leh oo ku lug leh beerista warshadkan. Ka dib markii ay 6kg oo kaliya ku iibsatay hal hektar, waxaa suurtogal ah in ay soo ururiso qiyaastii 800 kg oo malab ah. Waxaa fiican inaad u abuurto midabka caadiga ah ee la socda nooc ka mid ah warshad firida. Waxuu ku jiraa qaybta hore ee bisha Juun isagoo leh ubax yar oo casaan ah.
Waa muhiim! Waxaa ugu wanaagsan in la doorto dhirta beeritaanka sida in ubaxyada xilliyo kala duwan. Sidaas shinni jiri doonaa marwalba, iyo beekeeper waxay yeelan doonaan malab cusub, oo macaan leh.
Mordovnik Sharogolovy. Warshad wax soo saar badan leh ee beekeeper. Iyada oo hal hektar, waxaad heli kartaa qiyaastii 1 ton oo ah badeeco macaan. Warshadaan waxaa sida caadiga ah la wadaagaa phacelia, sidaas darteed waxa ay u fiicnaan doontaa in ay xidid ku yeeshaan goobta, iyo ubax sii socon doonaa muddo dheer. Beeridda waa in la fuliyaa Maarso, ka dibna by xagaaga kobciyaan ay duurka buuxa. Heerka mordovnik gaaro 2 m, ubaxa waxay ku saabsan tahay 4 cm dhexroor. Wakhtiga ubaxu wuxuu dhacaa bartamaha xagaaga. Honey ka soo mordovnika ee hooska iftiin leh ur wacan, iyo sidoo kale waxay leeyihiin hantida oo dhan ee maaddooyinka waxtar leh.
Phacelia Warshadda ku jirta maadada waa wax aad u hooseysa. Xilliga jiilaalka si fiican ayuu u socdaa. Waxay siin kartaa ilaa 600 kg oo malab ah hektar hektar ah. Haddii lagu beerayo bilowga Oktoobar, ubaxyada hore waxay u muuqdaan May. Waxyaalaha abuurka ayaa la dhigayaa ciidda si qoto dheer oo qiyaastii 2 cm ah, ka dibna caleemaha kowaad waxay u muuqan doonaan bil gudaheed.
Melissa. Carafka dhirta tani waa mid aad u soo jiitay shinni. Muddada ubax ee beedka liin waxay bilaabmaysaa midkood July ama bishii Agoosto dabadeedna waxay socotaa dhowr bilood. Honey ururiyey ka soo beerka liin waa mid aad u dhadhan leh oo leh caraf udgoon. Celcelis ahaan, dhererka hal warshad waa 90 cm.
Ma taqaanaa? Beekeepers mararka qaarkood xoqin finan leh melissa qalajiyey. Tan waxaa loo sameeyaa si beesku u dejiyaan oo si firfircoon ugu noqdaan guriga.
Geedo qajaar ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'ogrechnik' ama 'borage'. Si aad u dhadhamiso, dhirtu waxay u egtahay qajaar, waxa xitaa lagu daraa suxuunta qabow ee ugu horreeya iyo saladh. Celcelis ahaan, dhirirka dhirirku wuxuu gaaraa 80 cm, wuxuu noqon doonaa mid wanaagsan si uu u koro carrada, laakiin wuxuu u eg yahay carrada madow ee qoyan. Muddada ubaxyada - laga bilaabo Julaay ilaa dayrta. Beekeepers mararka qaarkood waxay gooyaan ubaxyada kuwaas oo soo daatay, ka dibna dhowr todobaad oo cusub ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan meelood. Waxsoosaar: qiyaastii 1 kg oo malab ah ayaa laga goyn karaa 1 ha. Sannadka soo socda, cawska dhirta cowsku wuxuu ku badin karaa is-goosashada, laakiin horeyba waa la gooyaa.
Dyagil. Warshadani waxay ku kori kartaa ilaa 2.5 m. Labaduba waxay furan yihiin, dhulluxaha qorraxda iyo ciidda aad u nafaqo leh. Laga soo bilaabo hal hektar ah oo ah goobta waxaad ku soo ururin kartaa qadar badan oo ah badeeco macaan. Warshad waxay u baahan tahay waraabin joogto ah oo dhexdhexaad ah, ka dibna caraf udgoonku wuxuu noqdaa mid soo jiidasho leh. Dyagil ma baqo dhaxan, sidaas darteed ma jirto baahi loo qabo inuu daboolo. Haddii aan la lumin tayada, wuxuu si fiican u socdaa jiilaalka.
Goldenrod. Waa hagaagsan tahay abuur. Haddii beeritaanka la sameeyo guga, sprouts ugu horeysa ayaa la arki doonaa ka dib labo todobaad Waxay ku koraan ilaa 1 m dhererka, ubaxa waxay leeyihiin midab jaalle ah waxaana lagu ururiyaa burooyinkeeda yaryar. Goldenrod wuxuu ku kori karaa nooc kasta oo ciid ah.
Esparcet. Warshadu waxay kori kartaa ilaa 70 cm oo dherer ah. Ubaxa waxaa lagu ururiyaa buraash waxayna leeyihiin midab madow. Faafinta sainfoin ayaa ugu wanaagsan by abuur, qaadashada beeritaanka isla markiiba ka dib imaanshada guga. Tuurku wuxuu u eg yahay digirta. Waxay u baahan yihiin in la beeray qoto dheer oo ah 3 cm iyo si aad u fiican u waraabiyey. Carrabku wuxuu u baahan yahay nafaqo, iftiin - ugu badan ee suurtogalka ah. Sidoo kale, warshad waa in si joogto ah loo waraabiyaa. Aag of 1 ha ku siin karaan ku saabsan 300 kg oo malab ah.
Safflower. Warshadu waxay si fiican u kori doontaa meesha ay dalagyada dalaggu u isticmaalaan si ay u koraan. Carrabku wuxuu u baahan yahay nafaqo. Waxaad ka kori kartaa abuur, beeridda waa in la fuliyaa guga hore. Safflower wuxuu leeyahay mudo gaaban oo gaaban, sidaa darteed malabku wuxuu noqon karaa mid yar.
Waa muhiim! Waxaa ugu wanaagsan in la isku dhafo guntada dhirta malabyada kale si aad u hesho qadar wanaagsan oo ah malab la goostay.
Secrets of beekeepers: sida loo helo ubax joogto ah ee dhirta malab
Waxaa la og yahay in dhirta malabku ay xiiso u yihiin bees kaliya inta lagu jiro muddada ay Bloom. Sidaa darteed, waxaa aad u muhiim ah in la hubiyo in ubax ee dhirta sida waa joogto ah.
Beereyaal qibrad leh ayaa ku talinaya ujeedadan, marka ugu horeysa, si loo baaro dhirta duurjoogta ah ee horey u jirey goobta iyo agagaarka degaanka (shinni malabku way duuli karaan), iyo sidoo kale inay ogaadaan marka ay ubaxayaan. Iyada oo ku saleysan xogta la helay, waxaa suurtogal ah in lagu daro beeritaanka dhirta malabyada, xilliga ubax ee taas oo beddeli doona.
Waxaa lagama maarmaan ah in la isku dardaro kalendarkaaga macmacaanka ee meel kasta oo gaar ah. Ka dib dhan, waa inay ku saleysnaadaan xaaladaha cimilada iyo cimilada. Waa lagama maarmaan in la doorto kuwa ugu firfircoon ee nectar ee beerashada, kuwa si fiican u koraan aag gaar ah.
Qariirad lacag ah: sifooyinka iyo sifooyinka injineernimada beeraha
Dhir for hamsters, bakaylaha iyo xayawaanka kale. Miyey cuni karaan?
Waa maxay sababta caws u koraan: sababaha ugu muhiimsan ee loo xoojiyo koritaanka
Asalka iyo taranka fardaha
Ganacsiga sanadka oo dhan: beerista warshad ee qajaarka ee lagu koriyo
Beeraley badan ayaa ku hawlan taranka iyo dayactirka nadiifinta caleenta, kuwaas oo ka qaybgalaya bandhigyo iyo tartamo kala duwan. Maanta waxaad ku baran doontaa jiilka xiisaha leh ee xayawaanka Hungarian iyo wax ka barto heerkiisa. Tixgeli xaaladaha xabsiga iyo daryeelka, iyo sidoo kale kuu sheegi kara cuntada saxda ah shimbirahan. Read More
Indhaha oo ah lo'da: qaabdhismeedka, midabka, cudurka
Codsiga marjoram: halka lagu darayo iyo meelaha ay isticmaalaan?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beekeeping 2019